SAVARAVINA NA FAMPIDIRANA AMIN’NY ANKAPOBENY Archives - Page 2 sur 2 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Catégorie : SAVARAVINA NA FAMPIDIRANA AMIN’NY ANKAPOBENY
Tsy mitovy amin‟ny boky rehetra ao amin‟ny Baiboly ny boky Apokalypsy, tsy mitovy amin‟ny famakiana ny boky hafa toy ny Matio, na Marka, na Lioka, na Jaona, izay azon‟ny olona rehetra vakiana ary mora takarin‟ny sain‟ny olona rehetra.Fa ny boky Apokalypsy amin‟ny maha boky milaza ny faminaniana azy, amin‟ny maha bokin‟ny zavamiafina azy, dia misy zavatra miafina maro ao anatiny, ary afeniny amin‟ny code na teny miafina maromaro ny ao anatin‟izany ka manarona ny zavatra tiany ho lazaina. Rehefa mamaky ity bokin‟ny « Apokalypsy » ity isika dia sahirana manakatra izay heviny, ary raha vao mamaky kelikely dia mijanona hoe : inona ary no tian‟ity boky ity lazaina ?
Ka izy ity dia milaza zavatra ara-panoharana, ara-paminaniana, ary ara-bakiteny.Ireo zavatra telo ireo no tsy maintsy lanjaina tsara raha vao mamaky ity boky ity.
Raha vao tsy hitan‟ny olona izay, dia sahirana ihany izy eny an-dalana mamaky azy ity. Maro ihany koa ny mikasa hampianatra ity boky ity, fa rehefa lasa kelikely ilay izy dia mivoana izay resahiny, satria tsy manaraka izay hevitra ara-bakiteny, ara-paminaniana na ara-panoharana, ary tsy hitany ny planina na drafitra arahina hampianarana ny boky Apokalypsy. Manaraka an‟izany koa ny tsy fahaizan‟ilay olona mandinika ny Soratra Masina amin‟izay lafiny telo izay, satria dia misy lafiny efa lasa ao, misy ny zavatra ankehitriny, ary misy ny mbola ho avy. Ka tamin‟i apostoly Jaona nanoratra ity boky ity, dia zavatra mbola ho avy daholo ny zavatra nosoratany, saingy na dia tamin‟ny andro mbola fahaveloman‟i Jaona aza dia misy zavatra efa lasa, nisy efa tanteraka, nisy ny niainany tamin‟izany andro izany ary misy ny mbola ho avy. Dia toy izany koa isika amin‟izao fotoana izao, misy ireo zavatra voalaza no efa “passé” avokoa, izany hoe efa lasa, misy ny miseho amin‟izao vanim-potoana iainantsika izao, ary misy ny mbola ho avy na “future”. Ka raha vao tsy mahay mametraka ireo fotoana ireo izany isika dia ho sahirana satria misy ny zavatra efa lasa mbola mety heverintsika fa mbola ho avy ihany; misy koa zavatra mbola ho avy dia lazaintsika fa efa lasa. Mila mandinika tsara an‟ireo zavatra ireo isika. Ka rehefa mandinika ny soratra masina dia tsy maintsy mijery ireo lafiny telo ireo (ny lasa ny ankehitriny ary ny ho avy) ihany koa.
5 septembre 2020 adminTeny fampidiranana« Prologue » na « Introduction »
Satria ity fanambarana ity, dia tenin‟Andriamanitra milaza an‟i Jesosy Kristy izay nampitondrainy ny hafatra. Ka na manaraka ny fivavahana” Islamiste “ianao, na “Borah”, na “Musulman”, na “Indouiste,” na” Boudiste”, na Fivavahan-drazana, ianao na fivavahana kristianaLire la suite…
I Jaona rehefa nahazo ny hafatra dia milaza, fa izy no nomena an‟ilay hafatra manao hoe: “ny filazana an’i Jesosy Kristy”. Ka raha ohatra izany ka hoe, tsy manana boky hafa mihitsy ianao hafa tsyLire la suite…
Eto ary dia izao no marika na fitomboka na « entête » voalohany apetrany eto: “Ny Fanambaran’i Jesosy Kristy, izay nomen’Andriamanitra Azy”.Izany hoe ity boky Fanambarana ity izany dia Andriamanitra mihitsy no nanome azy an‟iLire la suite…
5 septembre 2020 5 septembre 2020 adminTeny fampidiranana« Prologue » na « Introduction »
Hovakiantsika aloha ny teny fampidirana vao hitondra ny fanazavana isika, ka rehefa vitantsika ny fampianarana ny bokin‟ny apokalypsy dia mba ho anisan‟ireo olona mba nahavaky sy nihaino ny bokin‟ny apokalypsy hatramin‟ny farany isika. Apokalypsy 1:1–8Lire la suite…
14 août 2020 adminPlanin’ny boky Apokalypsy
Hiroso ary isika amin‟ny fanazavana ny bokin‟ny apokalypsy ity araka ireo drafitra na planina efa noraisintsika ireo. Fa alohan‟ny tena hidirantsika ao anatin‟izany dia ho raisintsika vetivety aloha izay voasoratra ao amin‟ny bokin‟ny apokalypsy 1:3Lire la suite…
14 août 2020 27 août 2020 adminPlanin’ny boky Apokalypsy
Misy ny atao hoe « prologue », na « introduction » na koa hoe fampidirana: Izay no fototry ny trano, ka tsy maintsy mandalo an‟izany aloha, fa tsy avy dia tonga dia hoe any amin‟nyLire la suite…
14 août 2020 14 août 2020 adminSAVARAVINA NA FAMPIDIRANA AMIN’NY ANKAPOBENY
Apokalypsy na Daniela: Ny boky Apokalypsy dia nadika tamin‟ny teny grika izy ity, izany hoe ny boky tany ampiandohana izany na ny original izany dia teny grika, satria ato amin‟ny testamenta vaovao izy, fa nyLire la suite…
14 août 2020 adminIreo « code » na sarisary an’ohatra
Misy karazana isa be dia be ihany koa ato anaty baiboly: Ny iray na 1 na ALFA 1= FIANDOHANA = GENESISY, fiandohan-javatra izany ny isa voalohany. Tsy misy isa zero ao amin‟ny baiboly, toy izanyLire la suite…
12 août 2020 adminIreo « code » na sarisary an’ohatra
Ny loko mena: Tsy » rouge à lévre » io fa « couleur rouge ». Milaza « rà mandriaka »ny loko MENA. Isaia 63:2 – 3 «2 Nahoana no mena ny fitafianao, ary ny akanjonaoLire la suite…
Ilaina ny mamaha ny hevitry ny loko satria rehefa tonga any amin‟ny lesona any aoriana kely isika, dia hahita an‟izany soavaly fotsy, soavaly mena, soavaly hatsatra, sns ka mila hadihadiantsika ny hevitry ny loko. NyLire la suite…
Ny valala: Ny valala dia hilazany zavatra mpandany, na mpandrava: Malakia 3:11 « Ary hasiako teny mafy ny valala* noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia hahavanom-boa nyLire la suite…
12 août 2020 12 août 2020 adminIreo « code » na sarisary an’ohatra
Fanazavana ireo sary an’ohatra 1
Ny RANO, na RANOMASINA na RANOBE na ONY Ny RANO, na RANOMASINA na RANOBE na ONY dia milaza VAHOAKA na FIRENENA na OLONA. Hitantsika izany tao amin‟ny Isaia 17:12-13 «12 [Ny handringanana ny Asyriana] IndrisyLire la suite…
Code na sary an’ohatra
Ity bokin‟ny Apokalypsy ity, dia misy sarisary an‟ohatra marobe ihany koa. Misy hevitra ara-panoharana be dia be, izy tsy milaza zavatra mivantana!ohatra raha ilaza fiangonana izy dia tsy milaza an‟izany mivantana, fa resahiny amin‟ny tenyLire la suite…